On https: // www.bescatray.com (ukususela ngoku, iya kubizwa ngokuba bescatray.com), undwendwe wedwa inkxalabo yethu enzulu. Eli phepha-nkqubo wabucala uchaza uhlobo lolwazi lobuqu ofunyanwa kwaye iqokelelwe bescatray.com kwaye iza kusetyenziswa njani na iinkcukacha.
Ukufuna Injini Iintengiso
ezinye iisayithi ezininzi zobungcali, bescatray.com imali kwi-ntengiso intanethi. Zethu ezithengisa amaqabane ziquka Iintengiso ze-Bing (Yahoo Iintengiso). Ukuze kusetyeniswe ngokukuko ROI yentengiso kwi-intanethi kunye ukufumana abaxhasi kujoliswe, bescatray.com isicelo ezinye codes umkhondo eyenziwe ezo iinjini zokuphendla ukuya PS umsebenzisi ingxelo kunye nokungena page ukubukela.
Business Iinkcukacha Data
zethu- Siqokelela zonke iinkcukacha zoqhagamshelwano ishishini ithunyelwe nge-imeyili okanye iifomu ze-web kwi bescatray.com evela iindwendwe. Ukuchongwa ndwendwe kunye ezinxulumene zoqhagamshelwano data wangena iya kugcinwa ngqongqo ukusetyenziswa lwangaphakathi bescatray.com ngayo. bescatray.com kuya kuqinisekisa ukhuseleko kunye nokusetyenziswa yabo data.
Siza kusebenzisa kuphela inkcazelo lwakho lobunikazi njengoko kuchaziwe ngezantsi, ngaphandle kokuba bebevumile ngokungqalileyo olunye uhlobo lokusetyenziswa, nokuba ngexesha ulwazi lobunikazi ziqokelelwa kuwe okanye ezinye uhlobo imvume kuwe:
1.We uya kusebenzisa ulwazi lobunikazi ukugqiba nayiphi imiyalelo ubeke.
2.We uya kusebenzisa ulwazi lobunikazi ukuba ikunike iinkonzo ezithile ukuba ucele, ezifana ukufikelela umthengisi.
3.We uya kusebenzisa ulwazi lwakho siqu ukuba baphendule imibuzo ukuba uthumele kuthi.
4.We uya kusebenzisa ulwazi lwakho siqu ukuthumela imeyili amaxesha ngamaxesha, ezifana zeendaba kunye nezaziso malunga promotions zethu.
5.We ukuveza iinkcukacha lobunikazi njengoko kufunwa ngumthetho okanye inkqubo yomthetho.
6.We ukuveza ulwazi lobunikazi ukuphanda urhwaphilizo olukrokrelwayo, ukuxhatshazwa okanye ezinye ukutyeshelwa nawuphi na umthetho, umgaqo okanye ummiselo, okanye imiqathango okanye iinkqubo ze le Web site.
Ukuphuma / IZILUNGISO
Xa isicelo sakho, siya (a) echanekileyo okanye uvuselele iinkcukacha zakho; (b) ayeke ukuthumela imeyili idilesi ye email yakho; kunye / okanye (c) ukukhubaza akhawunti yakho ukuthintela naziphi na ukuthenga elizayo ngaloo ngxelo. Uyakwazi ukwenza ezi zicelo kwi ulwazi icandelo umxhasi, okanye umnxeba, okanye imeyile isebe Inkxaso Customer isicelo sakho bescatray.com kule candy@bescatray.com. Nceda musa email inombolo yakho card mboleko okanye ezinye iinkcukacha eziyimfihlo.